I-China Wholesale Price ye-HXGN-12 AC High Voltage Switchgear Insimbi Eqinile Evaliwe Iluphu Switchgear-shengte abakhiqizi nabaphakeli |Shengte
I-Wholesale Price ye-HXGN-12 AC High Voltage Switchgear Insimbi Elungisiwe Yensimbi Evaliwe I-Loop Switchgear-shengte
I-H XG N-12 AC high-voltage fixed metal closed loop switchgear iyisigaba sesithathu se-AC elinganiselwe kagesi ongu-12KV, imvamisa engu-50H Z yasendlini ene-voltage loop yamandla kagesi kanye nogesi wokugcina.
Ukushintsha imishini.Isebenza kumabhizinisi ezimboni kanye nezimayini, izindawo zokuhlala, izakhiwo eziphakeme kakhulu, amapaki ezikole nezinye izindawo zohlelo lokusabalalisa lokwamukela nokusabalalisa amandla.
Uhlaka lwamathambo ekhabhinethi lushiselwe ngezimbobo ze-modulus ezingama-20mm, futhi ukushintshwa kuyikhabhinethi egxilile yohlobo lwebhokisi.
Ingxenye engaphezulu yomzimba wekhabhinethi yibhasi, igumbi lezinsimbi litholakala ngaphambi kwegumbi lebhasi, lihlukaniswe ipuleti lensimbi, ingxenye emaphakathi yomzimba wekhabhinethi iyigumbi lokushintsha imithwalo, futhi lihlukaniswe ibhodi lokufakwa ngaphakathi kanye negumbi lebhasi. .
Ipuleti lekhava eliphezulu lendikimba yekhabhinethi lihlinzekwa ngamafasitela okungenisa umoya, futhi ipuleti lomnyango wangemuva kanye ne-side plate kuhlinzekwa ngezimbobo zokungenisa umoya.
Ikhabethe kanye namaphaneli eminyango afafazwe ngopende we-epoxy polyester powder, welaphekile ezingeni lokushisa eliphezulu, enobuso obuhle nokumelana nokugqwala okuqinile.
Ukufakwa ugongolo ekhabetheni, ukwahlukanisa phakathi nendawo plate phansi ziphathwa galvanizing.
Phansi kwekhabhinethi, indandatho yenjoloba yohlobo lombhoshongo ifakwe ebhodini elingaphansi le-insulating, elifanele izintambo zosayizi abahlukene.
I-switch switch, i-grounding switch kanye nomnyango wekhabhinethi ine-interlock yemishini ethembekile, eye yaqaphela umsebenzi "wokuvimbela ezinhlanu".
Umnyango wekhabhinethi uyavala futhi uzungezisa ingidi yomnyango.Ngalesi sikhathi, inkinobho eyinhloko ivala futhi ivinjiwe.Ummese ophansi uyavulwa futhi ummese wokumisa ungavulwa.
I-switch eyinhloko ingavulwa kuphela ngemva kokuvulwa kommese ophansi futhi ukuvinjelwa komshini oyinhloko kukhishwa.
Ngemva kokuba inkinobho eyinhloko ivaliwe, ummese ophansi uyavala futhi uvimbe, umnyango wekhabhinethi ukhiyiwe, futhi isikhiye somnyango wokushintsha awukwazi ukususwa.
Uma nje inkinobho eyinhloko icishiwe, i-grounding cutter ingavuleka futhi i-baffle yokuphepha ivaliwe.
Kuphela uma ummese wokubeka phansi uvala lapho isikhiye somnyango singaphendulwa futhi kuvulwe umnyango wekhabhinethi.
Ummese ophansi kufanele uvalwe lapho i-fuse idinga ukushintshwa ngemva kokusetshenziswa kwephinikhodi ye-fuse.
Uma ungekho ummese wokumisa, ukuvulwa nokuvala ukusebenza kwe-baffle yokuphepha kusaqhutshwa ngendlela yokusebenza ngommese wokumisa, futhi ukulandelana okuhlanganisiwe kuyasebenza.
Isakhiwo sangaphakathi esiklanywe ngokucophelela sesikhiya sokushintshwa senza i-interlock ithembeke.
Ekhabetheni lekhebula, ngokwezidingo zomsebenzisi, lapho ulayini ufakwe ugesi, ukukhiya kwe-electromagnetic kungasetshenziswa ukulawula umnyango wekhabhinethi, noma i-padlock ingasetshenziswa ukulawula ukuvulwa komnyango wekhabhinethi.
Lapho ibhawodi likhishwa futhi livulelwa umnyango wekhabhinethi, kukhona umgoqo we-plexiglass kanye nophawu oluvimbela kuwo.
Umkhawulo ophansi wekhabhinethi uxhunywe nomugqa okhethekile wokwenza umhlabathi ukuqinisekisa ukuvikelwa okuthembekile nokuphephile komhlaba.
Ukushintsha kuxhunywe nezivikeli zokubonisa bukhoma nezibambisi ngamabha ethusi.
Yonke iminyango yekhabethe ifakwe isibonisi esibukhoma.Amaphaneli eminyango evulayo angasetshenziswa kuphela uma kungekho isibonisi sikagesi esiqinisekisiwe.
Isibani se-incandescent sifakwe kuphaneli yangaphakathi yomnyango wekhabhinethi ukuze kukhanye nomsebenzi wokufaka umswakama ekhabhinethi.
Ikalwe imvamisa 50Hz
Ikalwe okwamanje 630A Kuye ngengqikithi
Isilinganiso esiphezulu se-Fuse samanje - 100A
Isilinganiso sokubekezelelana kwesikhathi esifushane (i-thermal stability) yamanje (RMS) Layisha switch 20A/4s -
Ukushintsha komhlaba 20kA/4s
Ukumelana kwesekethe okuyinhloko ≤120μΩ
Ilinganiswe ngokulayisha okusebenzayo okwamanje 630A
Isilinganiso sokucisha iluphu evaliwe 630A
Ikalelwe Ukushaja Ikhebula Okwamanje 10A
Isilinganiso sokuvala sesifunda esifushane 50kA -
Isilinganiso sokudlulisa samanje - 1000A
Ilinganiselwe ngokuphulwa kwesekethe emfushane - 31.5kA
Imvamisa Yamandla IVoltage Yesikhathi Esifushane Yokubekezelela (1min) Ngokuphathelene nangesikhathi 42kv
Ukuphuka okukodwa 48kv
Ukushaqeka kombani ukumelana ne-voltage Ngokuphathelene nangesikhathi 75kV
Ukuphuka okukodwa 85kV
Impilo yemishini 2000 izigaba
Izinga lokuvikela IP3X
Ubukhulu bangaphandle (ikhabethe lokushintsha ngaphakathi nangaphandle) ububanzi x ukujula x ukuphakama 400x900x2000 (1700)
Okwedlule: Ikhwalithi Ephezulu XGN15-12 Uhlobo Lwebhokisi Olugxilile Lwensimbi Ye-AC Evaliwe I-Sulfur Hexafluoride Loop Switchgear Factory
Olandelayo: I-GCK(L) Eyenziwe ngokwezifiso Ikhabethe Lamandla Kagesi Aphansi I-switchgear Factory Price-shengte